Efa nisy ihany koa, hoy izy ny fifanarahana natao tamin’ireo mpandraharaha ny solika eto Madagasikara ka tsy ahiana hisy fiantraikany amin’ny vidin’ny solika eto an-toerana ny fahafahan’ny Jirama manafatra solika any ivelany. Ny 70%-n’ny vola mivoaka eo anivon’ny orinasa Jirama hatramin’izay dia vidin-tsolika avokoa, anisan’ny antony mamparefo ny orinasa. Ho fanohizana ny ezaka izay efa natomboka amin’ny fanarenana ny orinasa no antony tsy hirosoana amin’ny fanafarana any ivelany. Efa nisy ny antso tolo-bidy natao hahazoana solika amin’ny vidiny mirary ka ny volana novambra izao no fantatra izay orinasa vaovao hahazo ny tsenam-barotra. Hahazo tsenam-barotra vaovao ny Jirama hamatsiana azy. Etsy an-daniny, tafiditra ao anatin’ny paik’ady amin’ny fanarenana ny orinasa ihany koa ny fahafahan’ny orinasa manafatra solika tsy mandalo tsenam-barotra, raha ny nambaran’ny minisitra hatrany. Fanapahan-kevitra izay nankatoavin’ny filankevitry ny minisitra rahateo izany tamin’ny 11 septambra lasa teo.